Tim Cook wuxuu bilaabayaa "ShotoniPhone" gaar ah, ma wuxuu la jiri doonaa iPhone-ka cusub? | Wararka IPhone
Tim Cook wuxuu bilaabayaa barnaamijkiisa "ShotoniPhone" gaar ahaan ma la socon doonaa iPhone-ka cusub?
Maamulaha guud ee Apple wuxuu leeyahay dhamaanteen subax wanaagsan dhamaanteenna waxaan lajirnaa «buunbuunin» dusha saqafka sare iyadoo leh hamiga aan ku arko moodooyinka cusub ee iPhone-ka ee kujira nuxurka bilaaban doona wax ka yar 3 saacadood. Tan Apple aad ayey si fiican u yaqaanaan waxaanan aaminsanahay inay ku dhow yihiin rabitaan isku mid ah inay noo soo bandhigaan wax soo saarkooda cusub sida aan u aragno oo aan uga saarno shakiga aan ka qabno waxa ay xiran doonaan iyo waxa aysan xiran doonin.
Sidoo kale marka uu soo muuqdo agaasimaha guud ee shirkaddu Tim Cook oo wata "ShotoniPhone" gaar ah waxaan u rajeynayaa qof walba subax wanaagsan, laga bilaabo Tiyaatarka Steve Jobs laftiisa, waxaan kaliya rajeyn karnaa inay tani tahay Talaado weyn dhinac walba.
Subax wanaagsan ka timid Cupertino! Goor dhow ayaan is arki doonnaa! ☀️#shotoniPhone pic.twitter.com/hDzQjwdmRg
- Tim Cook (@tim_cook) 10 September ee 2019
Miyay noqon doontaa sawir la sii daayay oo ah nooca iPhone-ka cusub?
Waa hagaag tani waa waxa dad badani isweydiinayaan hadda waana taas jilayaasha galabta ayaa noqon doona iPhone iyo suurta galnimada sedexda kamaradood ee xaga dambe. Xaaladdan oo kale sawirka ayaa faahfaahinaya in laga soo toogtay iPhone iyo shabakadda bulshada ee iPhone-ka ee Twitter, waxa aynaan ogeyn ayaa ah in kani yahay qaab cusub iyo in kale. Waxaa laga yaabaa in saacado yar ka dib Cook laftiisa uu ku muujin doono nuxurka.
Wararkii ugu dambeeyay ayaa beeninaya qaar ka mid ah wararkii ugu dambeeyay sida suurtagalnimada in qalab kale laga soo dallaco iPhone-ka ama lagu daro dekedda USB C ee qalabka laftiisa. Waxaan kudhownahay inaan ogaano inay runta kajirto arimahan oo dhan waxaana horey usheegi karnaa inaan kudhownahay inaan ogaano warka Apple dareenkaan, hada wixii faahfaahin ah ee laxiriirta si loo ogaado waxa ay noogu soo bandhigi karaan tiyaatarka Steve Jobs gudaha Apple Park, oo ku taal Cupertino.
Wadada buuxda ee maqaalka: Wararka IPhone » iPhone » Tim Cook wuxuu bilaabayaa barnaamijkiisa "ShotoniPhone" gaar ahaan ma la socon doonaa iPhone-ka cusub?
Jebinta xanta: Apple wuxuu soo saari doonaa iPad cusub oo 10,2-inji ah
Apple waxay tixgelisay suurtagalnimada farriimaha barnaamijka ee iMessage sida uu qabo Craig Federighi